Nzira yekuvandudza sei webhusaiti yangu yeEO international?
Mazuva ano, nyika yemazuva ano yeIndaneti iri kuwedzera uye yakawanda pasi rose. Kutanga kubva kuEuropean Union yakavharwa neIndaneti kuwanika kupfuura 80%, kune dzimwe nyika dzakanyanya kufambisa dzine imwe nzvimbo inenge 90% yendima. Iko nhamba chaiyo inogona kuva yakanyanyisa kugutsikana muChina nevana 731 mamiriyoni vakamira vashandisi, zvisinei, vachimiririra hafu yehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwevanhu. Zvakanaka, Indaneti inopa mikana yakawanda yemikana yakasiyana kune avo vanoita webhusaiti vanoda chaizvo kutarisana nemiganhu, pasina zvipingamupinyi zvemutsika. Kuti kubudirire mune izvi, zvisinei, chero mutengesi wezvemabhizimisi anofanirwa kunge ane ruzivo rwakakwana rwevatengi vakasiyana-siyana vanofanira kugovera ivo chete zvinodzwa zviwanikwa kana mabasa.
Panguva imwe chete, kuumba zvakakodzerwa zviri kuitikawo kuva nyaya inofanira kufungwa. Kazhinji kazhinji, iwe unogona kufunga kuti nyika dzakawanda SEO zvinoreva kungova nehutano hwakabatana huri muChirungu chezuva nezuva. Asi mamiriro acho haasi nyore sezvaanoita sokutanga. Chinhu ichi ndechokuti kushandisa mazano emitemo yenyika dzakawanda zvinoreva kuchengeta mupfungwa uye kushandisa shanduro dzakasiyana siyana dzehutano uye hwekugara munzvimbo, zvakatsigirwa nehuzhinji hwehutano hwekutsvaga kugadzirisa. Uyezve, kubva pamaonero ekutengeserana kwenyika yose, kushandura zvakakodzera nyika dzeEO dzenyika yakazara zvinogona kuva basa rakazara uye rinopedza nguva. Pasi pandinenge ndichitarisa kwenguva pfupi zvirongwa zvekuti iwe uwane simba rakawanda rinoshandiswa munyika dzakawanda SEO, uye uwedzere mikana yezvokutengeserana inenge iri purojekiti yose yepaIndaneti.
Dzorera mune zvose zvekuda kwezvinhu zvakadzama
Kufunga pasi rose, uchaona kuti kunyange Google pachayo ine marudzi akasiyana-siyana ehutano uye mararamiro akasiyana-siyana anowanikwa mumapeji ekutsvaga emagetsi ekutsvaga (SERPs) kumunhu mumwechete. Ndinoreva kuti munhu mumwechete wekutsvaga mubvunzo anogona kuuya nemhinduro yakasiyana kubva kune imwe nyika kune imwe nyika. Kutaura zvazviri, Google ine SERP yayo yakagadzirirwa neharaunda yezvakasiyana uye iri kuita zvakanakisisa kutevera zvakasimba kune dzimwe nzvimbo dzenharaunda dzenharaunda yepamusoro yevashandi vemunyika munyika dzose. Kana iri mazwi makuru nemitengo yekutengesa, pasi pemamwe matambudziko anobuda mumitauro yakasiyana-siyana uye mazwi emunharaunda. Chimwe chikamu chikuru chemashoko makuru anowanzove achikundikana kuwana shanduro yakakwana. Izvo zvinofanira kufungwa nezvazvo pakutanga uye zvakakosha, zvechokwadi kutarisa vagari vomunharaunda, tsika dzechimiro, nezvimwe zvakawanda zvakasiyana-siyana zvisati zvichinyatsoratidza pachena kunyange kune webmasters vanoziva kwazvo. Izvi zvinoreva nyika dzakasiyana-siyana inogona kuve nezvakawanda zvisingaenzaniswi, kunyange mukati memabhizimisi mamwechete. Zvisingatauri mazita emarudzi ose, kunyanya achitaura kune izvo chaizvo vanhu vanoda kuona mushure mekupedzisira kusvika pakusarudza kutenga.
Ita urongwa hwako kune dzimwe nyika SEO
Chokutanga pane zvose, kusimbisa sangano rese reEO mazano, ngatitorei zvisizvo-kutarisa zvakanaka kwemashoko anokosha, somuenzaniso kuChina, hazvirevi iyo yakaisvonaka yakanaka kune dzimwe nzvimbo pasi rose. Somugumisiro, iwe uchafanirwa kutanga ne SEO munzvimbo yako yekugadzirisa, kutanga zvisikwa zvakagadzirirwa zvakananga kune vateereri vawakasarudza mukati meimwe nyika. Kuita kudaro, iwe unonzwisisa hurukuro yepamatunhu maitiro emugwagwa, uyewo humwe humwe hunokosha muzvinyorwa zvese zvinodaidzwa. Uyezve, iwe uchafanirwa kushanda kune zvimwe zvigadzirwa zvehutano zve SEO pane imwe nyika yepamusoro. Ndinoreva kuti iwe unofanira kuvhara mapeji ako ne hreflang tags.
Kazhinji kacho, hreflang tag inomirira chikamu chenheyo inoshandiswa neGoogle kuti inzwisise nyika inotarisirwa, uye naizvozvo mutauro wehupenyu hwako. Ichakubatsira iwe kuva nechokwadi chokuti zvakakunakira zviri kuratidzwa munzvimbo yakarurama zvakarurama. Somuenzaniso, kunyange mukati memutauro wechiSpanish, panova nekukosha kwemashoko ekukosha paunenge uchigadzirisa zvinyorwa zvako zveSpain pachako, uye nokuenzanisira kuzviratidza kuvashandi veArginia. Kushandisa hreflang tags kuchapa simba rako nehuwandu hwehutano hwemushandisi kuburikidza nekuwedzera zvakakosha kune zvinyorwa zvako.
Panguva imwecheteyo, kushandisa hreflang tags kunobatsira kuderedza kutyisidzira kwehuwandu hwehuwandu hwemashoko, kuudza Google kuti zvinyorwa zvakanyora zvakanyorerwa vateereri vemunharaunda. Kutanga nekunyoresa zvinyorwa zvako, ndinokurudzira kushandisa shanduro yeSO 639-1 mumitauro yose, maererano nekutumira mapepa ako ose asingasviki 10 000 URL, kana kuitora igoverwa muzvikamu zvakawanda zvakare. Pasi pane 3 zvirongwa zvikuru zvekuita kuti zvinyorwa zvako zvibatanidzwe ne hreflang tags nenzira yakakodzera:
Tora HTTP Header yako yakatsigirwa ne hreflang tag kuti uve nechokwadi chokuti iri kuuya nejiji yewebhu rose
mapepa ako akabatanidzwa ne hreflang tags
Tsvaga peji yega pachayo yakanyorwa necheti pamwe chete
Ita mazano ako akavakwa uye akabatanidzwa
Ngatitorei zvishoma-kugadzira nzvimbo kune dzimwe nyika SEO hazvirevi kushandurwa kwezviri nyore kwemaji-ewebhu ane nzvimbo. Tinofanira kutarisana naro - kuumba nzvimbo yakatendeseka kunzvimbo kunoreva kugadzira zvinyorwa zvinyorwa zvinenge zvichinyanya kukosha kune avo vanofarira zvekunzvimbo nekutsvaga mamiriro. Ndinoreva kuti iwe uchafanirwa kushandura tsvakiridzo yekusanganisa kweimwe nyika iwe uri kutaurira. E. g. , kana iwe uchienda kunzvimbo dzakawanda nebhizimisi rako, ndinokuratidza kuva nemapeji akasiyana-siyana uye, zvechokwadi, zvakagadzikana zvakasiyana-siyana kuti vawane kuonekwa zviri nani munzvimbo, uyewo mapeji ehuwandu emagetsi ekutsvaga.
Usambofa uchikwanisa kubhadhara nguva yako nemabasa ekuunganidza pamwe nyika yako, yemo, uye yekufambisa zvirongwa zvekushanda kweSENO inobudirira yepasi rose.Ndinokurudzira kuumba urongwa hwekutanga, kutanga nemamwe nyika iyo inowanzopa vakawanda vangave vatengi vamunotarisa mukati memashamba enyu. Somuenzaniso, kana iwe unotarirwa nevashandisi veChinese, zviri nani kuti uone kuti vanopfuura 95% vevashandisi veIndaneti vemo vari kutarisa paIndaneti kuburikidza nemichina. Ndicho chikonzero mabhizimisi anoda kukunda makwikwi anofanira kunge ane zvinyorwa zvavo zvakashandurwa zvakanaka maererano nekushanda kwemafoni.
Pakupedzisira, usambokanganwa kuverenga migumisiro yenyika yako yeEO yepasi rose kuburikidza nekunyatsocherechedza kwekushanda kwako ikozvino. Ita kaviri-chengetedza maitiro ako ose mukati memunharaunda imwe neimwe inotarisirwa nguva dzose sezvaunokwanisa. Nguva dzose yeuka kutarisa nzvimbo dzako, pamwe nekusimbisa mapeji ako ewebhu akatevedzwa zvakakwana kune imwe nyika kana nzvimbo. Mushure mezvose, musanetseka kushandisa simba rakakura rePPC kuti muwedzere mumisika itsva. Kushandisa zvakanaka kwePPC mukati memunharaunda yako yepasi rese SEO ichakubatsira kuti uwane kunzwisisa kwakanaka kwehutano hwemunharaunda, kutendeuka kwemaitiro, pamwe nekuwana kutengesa zviri nani munyika itsva Source .